Zimbabwe Travel, Information, & Things to Do
Zimbabwe is a country within the Sub-Saharan Africa region of the continent of Africa. This country has a population of over 12,236,805 Zimbabwean people and covers an area of 390,580 square miles. The capital of Zimbabwe is Harare. The country's GPS coordinates address is latitude -19.015438 and logitude -19.015438. [Map of Zimbabwe].
Discover and explore Zimbabwe. This online guide of information, articles, and photos of Zimbabwe helps you learn about the cities, natural attractions, and Zimbabwean culture.
Elephant in the Shadows - Zimbabwe